Fepetra takiana amin'ny Semalt Expert izay mila mianatra momba ny hosoka sy ny fanararaotana Online - Ity ny antony
Ny hosoka amin'ny aterineto dia antsoina matetika hoe "hosoka amin'ny aterineto" na "tranga". Ity karazana hosoka itymiseho amin'ny endrika marobe, toy ny mailaka mailaka. Ny sazy noho ny fampiasana na fanaovana didy sandoka ny sandan'ny paositra dia folo ka hatramin'ny roapolo taona an-tranomaizinaany Etazonia. Matetika ireo mpikamnana no maka tahaka ny solontenan'ireo fikambanana mpanao asa soa ary mitady ny fanampianao ho an'ireo niharam-boinaloza voajanahary, fanafihan'ny mpampihorohoro, ady an-trano na valan'aretina. Raha toa ianao ka niharan'ny tranganà aterineto, dia zava-dehibe ny manaikyny tatitra ho an'ny serasera aterineto momba ny Cybercrime Australian Online (ACORN) raha mbola azo atao - patek 5712 replica. Ny tatitra natao tamin'ity tambajotra ity dia ny handefasana ny polisyna sampam-pitsikilovana ho an'ny fanadihadiana azo atao.
Jason Adler, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success of Semalt ,dia mifantoka amin'ny karazana hosoka amin'ny aterineto miaraka amin'ny tanjona hanampy anao hiaro ny tenanao amin'ny fanafihana.
Ny karazana hosoka an-tserasera amin'ny ankapobeny dia ny hosoka amin'ny Internet, ny trangam-panafana, ny fangalarana famantarana,ary ny mpivarotra sy ny varotra.
hosoka amin'ny Internet
Voafaritra izy io ho fampiasana fitaovana tsy ara-dalàna azo atao mba hahazoana vola, manokanafampahalalana, fananana na vola avy amin'ny orinasa tsy miankina na hacker. Ny karazana ankeriny amin'ny banky amin'ny aterineto dia ny famerenan-tsakafo ary ny mulephishing. Ny hackers matetika dia mampiasa ny fampahalalana mafonja toy ny tenimiafina na solonanarana mba hahazoana ny antsipiriany. Mety hahazo fampahalalana toy izany izy ireony tablette, fitaovana finday na solosaina amin'ny alàlan'ny fandefasana malware sy viriosy.
Amin'izao andro izao, maro ny olona mampiasa ny findainy sy ny smartphone mba hiditra amin'ny bankykaonty. Ny jiolahy dia mahalala fa sarotra ho azy ireo ny miditra amin'ny fampahalalana azonao. Noho izany, mandefa mailaka imailaka izy ireo na mangataka anao hikendry manokanarohy, manazava ny tsiambaratelo tsiambaratelo. Aza mamaly amin'ny mailaka tsy fantatra. Zava-dehibe ihany koa ny tsy ahafahanao manindry ny rohy tsy fantatraary tsy niraharaha ireo olona izay manohy mandefa anao.
Ny fikolokoloana etsy ankilany dia fikasana hahazo fampahalalana mafonja toy nyanarana, tenimiafina, PayPal ID sy ny antsipirian'ny karatra amin'ny carte de crédit, amin'ny fanovana ny maha-olona azo itokisana amin'ny fifandraisana elektronika.
Ireo filaharam-be amin'ny spam manokana dia manampy amin'ny fampihenana ny isan'ny mailaka phishing tonga any aminaoinboxes. Azonao atao koa ny mametraka ny antibiotika na ny rindrambaiko maimaim-poana mba hitazonana ny mombamomba anao. Manolo-kevitra ny AFP fa tsy namaly ianaomailaka mailaka ary hamafa azy ireo araka izay azo atao. Raha misy fitaovana, dia tsy tokony hanokatra mihitsy ireo entana ireo raha metyprograma tsy voavonjy na virosy.
fivarotana sy varotra
Ny hackers matetika dia mampiasa ny teknolojia farany hananganana tranonkala sandoka hosoka izay mijerytoy ny tranokala malaza amin'ny varotra antserasera. Mampiasà fampisehoana sy tetik'ady hentitra mba hisarihana olona maro kokoa. Zava-dehibe ny tsy hanaovana izanyAmpidiro ny mombamomba anao manokana, ny antsipiriany amin'ny karatra na ny karatra PayPal amin'ny tranonkala toy izany. Ny tranonkala varotra rehetra dia manana fitsipika sy fitsipika henjana.Tsy afaka manafika anao amin'ny alalan'ireo tranonkala ireo ny mpihomehy, ary fantatr'izy ireo ny fomba hiatrehana ny olona any ivelan'ny tranokalan'ny varotra. Azonao atao ny miresaka amin'nyKomisiona Aostraliana sy Komitin'ny Consumer mba hampihenana ny mety hisian'ny hosoka amin'ny aterineto. Rehefa mampiasa tranokala auction tahaka ny eBay ianao, dia izy ireoTsy hangataka na inona na inona momba ny karatra fiasanao na PayPal ianao.
Raha naharay mailaka mampiahiahy ianao, ny fomba tsara indrindra sy mora indrindra dia ny mamafaizy ireo aloha be araka izay azo atao. Zava-dehibe ihany koa ny tsy ahafahanao manindry ny fandefasana nalefan'ireny mailaka ireny.